परदेशीको ‘सरप्राइज’ उपहार ! – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
परदेशीको ‘सरप्राइज’ उपहार !
२०७१ बैशाख २, मंगलवार ०२:५२ गते
परिवारलाई खुसी र सम्पन्न बनाउन परदेशिएको हर्षबहादुरले आफ्नी श्रीमती र छोराछोरीको नाममा लामो पत्र लेख्दै विदेशको वर्णन गरेको थियो । नेपालीले विदेशमा बगाउनु परेको पसिना, परदेशको जिन्दगी र दुःख–पीडा समेटेर लाहुरेले लामो निबन्ध नै तयार पारेको
थियो । आफूले परिवारका लागि मात्र परदेशमा दुःख गर्नु परेको र पैसा कमाएपछि नेपालमै आएर व्यापार–व्यवसाय गरेर आफ्नो पसिना र श्रम स्वदेशमै खर्च गर्ने उसले उद्देश्य लिएको थियो ।
रेमिट्यान्सको सदुपयोग गर्न सके भविष्यमा आफ्ना सन्तानहरुले सुख पाऊलान् भनेरै उसले
बारम्बार श्रीमतीसँग फोनमा सम्झाइरहन्थ्यो । उसकी श्रीमतीले पनि कर्तव्य पालना गर्थी । लाहुरेले कमाउँदै गयो । उनीहरुको परिवारमा पनि आर्थिक समृद्धि हुँदै गयो । लाहुरेलाई गाउँबाट सहरोन्मुख गाउँतर्फ बसाई सर्न मन लाग्यो । पुर्खौली सम्पत्ति बेचबिखन गरेर उसले आफ्ना श्रीमती र छोराछोरीको सुखद् भविष्यका लागि सहरकै प्लटिङमा जग्गा किन्यो । गाउँमा १५ कठ्ठा जग्गा बेच्दा मुस्किलले सहरमा १० धुर जग्गा जाडेको थियो । त्यसैमा बनाएको थियो आकर्षक डिजाइनको दुईतले पक्की घर । त्यसपछि परिवारलाई स्थान्तरण गरेको थियो । ऊ दोस्रो पटक विदेश जाँदा घरमा पेन्टिङ पनि गरिएको थिएन । फर्निसिङका कामहरु पनि पूरा भएका थिएनन् ।
नयाँ घरको व्यवस्थापन गर्दा–गर्दा उसकी श्रीमती दिक्क भएकी थिइ । तर, प्लटिङमा अरु घर भटाभट बन्न थालेपछि उसलाई घरको तनाव कम भएको थियो । घर तयार भएलगत्तै परदेशीको पार्सल आएको थियो । त्यसमा थियो एकथान चिठ्ठी, चलकेटका बट्टाहरु अनि एउटा मोबाइल फोन ।
प्लटिङमा चालीसभन्दा बढी घर बनिसकेका थिए । लाहुरेकी श्रीमतीको जीवनशैलीमा परिवर्तन आउन थालेको थियो । आवास क्षेत्रमा प्रायः विभिन्न सरकारी उच्च ओहोदाका हाकिमहरुले घर बनाएका थिए । कमाउ अड्डामा जागिरे भएकाहरुको रहनसहन नै बेग्लै
थियो । विस्तारै आवास क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरु सबैले लगाउन–खान सिके । मानौँ, एउटा छुट्टै संसार बन्यो त्यो नमूना आवासीय क्षेत्रमा । बाहिरी वातावरणको प्रभावमुक्त बन्यो त्यो क्षेत्र । त्यहाँ बसोबास गर्नेहरुका लागि सपिङ, खेलकुद, पार्टी र स्वीमिङ गर्ने सुविधासमेत थियो । हुनेखाने र सुविधासम्पन्न जीवन बाँच्नेहरुका लागि त्यो आवास क्षेत्र वरदान नै सावित भएको थियो । व्यस्त हुँदाहुँदै पनि जाँगर चलाएर लाहुरेकी श्रीमतीले लाहुरेलाई प्रेमपूर्ण पत्र लेख्न भ्याएकी थिइ । यसरी–
मीठो माया ।
हजुरको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु । हामी सकुशल छौँ । नेपालको अवस्थाले चाहिँ कुशल हुन दिएको छैन । यहाँ महङ्गी बढेको बढ्यै छ । दैनिक खर्च चलाउन पनि धौ–धौ परिरहेको छ । यो आवास क्षेत्र त हेर्दामात्र राम्रो हो । यहाँ आएपछि हरेकको जीवनशैली परिवर्तन हुँदो रहेछ । काम पनि केही छैन र फुर्सद पनि कहिल्यै हुँदैनजस्तो । समाजमा बसेपछि समाजअनुसार चल्न सक्नु पर्दोरहेछ । छिमेकमा रहेपछि छिमेकीसँग घुलमिल हुन सक्नु
पर्दोरहेछ । हजुरले सोचिस्येको जस्तो कहाँ हुँदो रहेछ र ? फेरि लाहुरेको परिवार भनेपछि ‘स्ट्यान्डर्ड मेन्टन’ पनि गर्नुपर्दो रहेछ ।
छोराछोरीको पढाइको चिन्ता लागेर बोर्डस् गरिदिएको छु । के गर्नु सबै छिमेकीले बोर्डस् नै राख्नुपर्छ भनेपछि राख्नैप¥यो । छोराछोरीको घरमा जतिखेर पनि फेसबुकमै बास हुन्थ्यो । भनेको मान्दैनथे । महङ्गै परे पनि आफ्नो छोराछोरीको पढाइमा सम्झौता गर्ने कुरा आएन । अघिल्लो महिना छिमेकीहरुलाई खाना खान घरमै बोलाएको थिएँ । यत्रो घरमा ‘एउटा इन्र्भटर पनि राखेको छैन ?’ भनेर खिसी गरे । त्यसपछि मेख नै मार्नेगरी टिभी, पंखा सबै चलाउन मिल्ने इन्भर्टर र ब्याट्री जोडेकी छु । अहिले लोडसेडिङको समस्याबाट मुक्त भएकी छु । समयमै टिभी कार्यक्रम हेर्न पाएकी छु । इन्टरनेट मेरो साथी भएको छ । लोडसेडिङमुक्त भए पनि साह्रै खुसी लाग्दो रहेछ । हुन त यस क्षेत्रमा जेनेरेटरको सुविधा पनि छ । तर, महसुल प्रतियुनिट ३० रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । इन्भर्टरले धानुन्जेल जेनेरेटरको लाइन जोड्नु परेको छैन ।
किचेनदेखि डाइनिङसम्म र गार्डेनिङदेखि फर्निसिङसम्म जोड्दा हजुरले पठाइस्येको पैसाले ऐया पनि भएन । यहाँ महिला समूह गठन गरेका छौँ । समूहको निर्णयअनुसार
हरेक सदस्यले महिनाको एकदिन घरमा आवासका सबैलाई भोजन गराउनुपर्छ । यस्तो नियम बनेपछि मैले घरमा खाना बनाउनै छाडिदिएको छु । एक दिन बिहान–बेलुकी खाना खुवाएपछि चालीस दिनसम्म आनन्द हुन्छ । मेरो पालोमा त घरमा भन्दा पनि क्याटरिङलाई जिम्मा दिने विचार गरेकी छु । खाना पकाउन नपरेपछि दिन काट्न साह्रै गाह्रो
पर्दो रहेछ ।
शरीर मेन्टन गर्नुपर्छ भनेर घरमै इलेक्ट्रिक साइकलबाट एक्सरसाइज गर्ने गरेकी छु । जसबाट भर्खरकी देखिएकी छौ भन्छन् छिमेकी दिदीबहिनीहरु । उमेरमै हो सबै कुराको ख्याल गर्ने भनेर कपालमात्रै स्ट्रेट गरेको के थिएँ, भन्सारको हाकिमकी मोडेल सालीले दिदी मोडलिङ गर्ने हो ? तपाइँको फेस त फोटोजेनिक छ भनेर उक्साइ । कुरा हो रहेछ पछि थाहा पाएँ । यसपछि मेकअपदेखि कुन पहिरन सुहाउँछ भन्ने उसैले सिकाइरहेकी छे । मैले सेतो गाउन लगाउँदा बेलायती महारानीजस्तै लाग्यो रे उसलाई ।
गाउँमा भएको भए खेतिपाती गर्नुहुन्थ्यो । गाईभैंसी पाल्नु हुन्थ्यो । अहिले त लाग्छ, दुई माना दूधका लागि किन त्यतिविधि दुःख गर्नु ? बरु कालो चिया खान जाति । यो महङ्गीमा गाईभैंसी पालेर के
फाइदा ? तरकारीको आवश्यकता नै पर्दैन । त्यो टिभीमात्रै कति हेर्नु ? नयाँ रिलिज भएका फिल्म एउटै बाँकी छैनन्, हेर्दा–हेर्दै दिक्कै लागिसक्यो । बरु मिल्नेहरुसँग म्यारिज खेल्यो
बस्यो । आवास क्षेत्रमा त एक से एक म्यारिज खेल्ने हाकिम्नीहरु
छन् । कहिलेकाहीँ भान्दाइको साथी, मितदाजुको साथीहरु आइसिन्छ । रमाइलो लाग्छ कहिलेकाहीँ घरमा पाहुना आउँदा ।
यो म्यारिज भन्ने खेल नै अजिब रहेछ नि, मलाई राम्रै फापेको छ । यसैबाट मासिक १५ हजारजति थप आम्दानी हुन्छ र घर चलाएकी छु । नत्र कति ऋण लागिसक्थ्यो मलाई । हरेकजसो घरमा मोडल–मोडलको कार छ । बजारतिर जानुप¥यो भने लुखुर–लुखुर हिँडेको देखेर पल्लो घरको बाबुले म पु¥याइदिन्छु भाउजू भनेर कतिचोटी पु¥याइदियो
विचरा । आफैलाई लाज लागेर
आयो । अनि एउटा स्कुटर किनेकी छु । कतै जान नपरे पनि साधन भएपछि घरको शोभा बढ्ने रहेछ । स्कूटर किनेदेखि कहिलेकाहीँ माइती पनि पुग्छु ।
हाम्रो घर पछाडिको खाली चौरमा गाँजा खाने केटाहरुको बास हुन थालेपछि सबै मिलेर राति ‘सेक्युरिटी गार्ड’ पनि राखेका छौँ । त्यसपछि चोरीको पनि डर छैन । महिला बढी भएको ठाउँमा बढी नै डर हुँदोरहेछ । पैसाको अभाव भएपछि तल्लो तलाकोे तीनवटा कोठा भाडामा लगाएकी छु । उनीहरुले अर्को वर्ष हाम्रै आवास क्षेत्रमा घर बनाउने भएका छन् । घरमा बस्नेहरु साह्रै असल छन् । मासिक १२ हजार भाडा तिर्छन् । त्यसबाटै टेलिफोन, विद्युत्, खानेपानी, केबुल लाइन, इन्टरनेट र समूहमा पैसा तिर्न पुग्छ । छोराछोरीको पढाइ खर्च, होस्टल फि, ट्युसन फि नतिरेको दुई महिना भइसकेको
छ । बोर्डिङबाट फोन आउने बेला भइसक्यो । जति भए पनि पैसाले पुग्दो रहेनछ ।
समूहबाट १५ दिनको टुर जाने कार्यक्रम बन्दैछ । सपिङ गर्नै पाएको छैन । यही महिनाको अन्तिममा समूहबाट ऋण खाने विचार गरेकी छु । हाकिम्नीहरुले दार्जिलिङ, सिक्किम हुँदै गोवा पुगेर फर्किने भनिरहेका छन् । इज्जत धान्न भए पनि जान्न भन्न भएन । फुर्सद छैन भनेर कसरी ढाँट्ने ? उमेर छँदै नघुमे बुढेसकालमा चारधामबाहेक अन्य ठाउँमा घुम्न सकिँदैन । टुरबाट फर्किँदा नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रहरु पनि घुम्ने कार्यक्रम छ ।
३५ नम्बर घरको हिरो भाइले फिल्म बनाउँदै छ रे । दिदीलाई इच्छा भए अलिकति लगानी गर्नुस्, राम्रो रोलमा अभिनय गर्न दिउँला भनेको छ । आफूभित्रको कलाकारितालाई मर्न दिने कुरा पनि आएन । टुरबाट फर्केपछि अभिनयतिर लाग्ने पनि चाहना छ । संसार कहाँ पुगिसक्यो । हामी भने अरुकै अभिनय हेरेर मस्त भइरहेका छौँ । हजुर आइसिने बेला नेपालमा थुप्रै परिवर्तनहरु भइसक्ने छ । म रङ्गमञ्चको क्षेत्रमा नाम कमाइसकेको हुनेछु । अनि हामी आफैले एउटा सफल चलचित्र बनाउन सक्छौँ ।
कति गन्थन लेखुँ । भन्नुपर्ने कुराहरु धेरै छन् । आवश्यक सामानहरुको सूची पनि लामो छ । पैसाको अभावको बारेमा त
उल्लेख गरिसकेँ । हजुर आफै बुझ्ने होइसिन्छ । बाँकी अर्को पत्रमा उल्लेख गरुँला । आफ्नो ज्यानको ख्याल गरिस्यो है ।
हर्षिकाको पत्र पाएपछि हर्षबहादुरले गहभरि आँसु बनाएर हर्षित भयो ।
टुरबाट फर्केपछि हर्षिका पनि औधी हर्षित भइ । आफ्ना प्राणप्रिय श्रीमान्लाई यात्रा संस्मरण सुनाउन हरेक ठाउँमा भएका अविश्मरणीय क्षणहरुलाई डायरीमा टिपोट गरेकी थिइ । र, लेख्न थालेकी थिइ अविश्मरणीय यात्राका क्षणहरु…।
काठमाडौँको एउटा अपरिचित नम्बरबाट उसलाई फोन आयो । विदेशबाट पार्सल आएको खबरले ऊ गद्गद् भइ । र, लेख्दै गरेको संस्मरणलाई क्रमशः गरेर उसले यात्रामा पाइला बढाइ । उसले एउटा आकर्षक पार्सल पाइ उसकै प्यारो श्रीमानले पठाएको । पार्सलमा उसले फर्माइस गरेका र श्रीमान्को
रोजाइमा स्पेशल गिफ्ट थियो– नयाँ वर्ष २०७१ को ।
पार्सलभित्र हर्षिकाले पठाएको पत्र पनि थियो । त्यही पत्रको अन्त्यमा लेखिएको थियो–
लाखौँलाख मायाका कोसेलीहरु तिमीलाई । सँधै खुसी भइरहनु । नयाँ वर्ष २०७१ को मुटुभरि उपहार तिमीलाई ।
उही दुःखी परदेशी
हर्षिका अचम्ममा परि । कागजै अभाव भएजसरी आफैले पठाएको पत्रमा छोटो शुभकामना सन्देश आएकोमा । एक मन त श्रीमान्सँग रिसाइ पनि । सिंगो शरीर त कफिन बाकसमा प्याक भएर आएको
थियो । र, आएको थियो हर्षबहादुरले दुःख गरेर कमाएको रेमिट्यान्स । त्यसमा थप भएको थियो उसको बीमावापतको क्षतिपूर्ति रकम । हर्षिकाले आँसु बर्साइ । उसले लेख्दा लेख्दैको यात्रासंस्मरण सम्झी । उसले बिलौना गर्दै–गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आउँदै थियो– हर्षबहादुरजस्ता नेपालीहरुको मृत शरीर बन्द कफिन बाकसमा निरन्तर ।